Kadib guushii Rostov, Mourinho oo si lama filaan ah u shaaciyay inay guul daraysan doonaan axada – Gool FM
Kadib guushii Rostov, Mourinho oo si lama filaan ah u shaaciyay inay guul daraysan doonaan axada
(Manchester) 17 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa silama filaan ah ugu dhawaaqay in kooxdiisu ay guul daro soo gaari doonto axada marka ay booqato kooxda Middlesbrough.
Jose Mourinho ayaa ku dooday in kooxdiisu ay tahay kooxda kaliya ee ciyaaraysa koobabka yurub marka la eego kooxaha uu tartanka culus kala dhexeeyo sida Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool iyo Arsenal.
54 jirkaan reer Portugal ayaa sheegay in kooxdiisu ay guul daraysan doonto axada, maadama ciyaartoydu ay dareemayaan daal farabadan.
“Waxaan leenahay cadaw badan, sida caadiga ah waxay ahayd inaan lahaano hal cadaw oo ah Rostov laakiin arinku waa uu adagyahay marka aan ciyaarno isniin iyo khamiis” ayuu yiri Mourinho.
“Dadka waa ay u fududahay inay yiraahdaan waxay ahayd inaad sifiican u ciyaartaan, laakiin waqti xaadirkaan waxaa jira waxyaabo badan oo u socda si lid nagu ah”.
“Marwalba daal ayaa saamayn nagu leh, sidaas darteed waxay u badantahay inaan guul daraysan doono kulanka Middlesbrough ee axada, kooxaha naga sareeya ma garanayaan waxa uu yahay daal ama kulamo hoosta isaga jira iyo xitaa hurda yari”.
“Waa arin xun, waayo dhamaan 5-ta koox ee naga sareeya waxay ciyaarayaan isbuucii kaliya hal kulan, qaar kamid ahna bilowgii xiliciyaareedka ayeey sidaas ahaayeen (wuxuu ula jeedaa Chelsea).
Waa kuwee kooxaha isugu soo haray sideed dhammaadka Europe League, goormaa la sameynayaa isku aadka, goormeysa ciyaarayaan??
Mourinho oo xalay Moos siiyay Marcos Rojo, muxuuse ka yiri falkaas? (Muuqaal)